तपाईंको, बच्चाको उचाई बढेन ? खानामा समावेश गर्नुस् यस्तो १० चीज, जसले दिन सक्छ उत्कृष्ट नतिजा ! – News Nepali Dainik
प्रकाशित मिति: बिहिबार, माघ २२, २०७७ समय: १२:२१:१९
मानिसको उचाइ आनुवंशिकतामा निर्भर गर्दछ, तर शरीरको उचित विकास र विकासको लागि, डाइटमा पर्याप्त पोषकहरू हुनु पनि आवश्यक छ। वैज्ञानिकहरूले अधिकतम उचाईमा पुगेपछि मानिसको लम्बाइ बढाउन गाह्रो हुन्छ भनेका छन् ।
तर के तपाइँलाई थाहा छ रु हाम्रो खानामा समावेश धेरै खाद्य वस्तुहरूले हड्डी र जोर्नीहरूलाई बलियो बनाएर कद बढाउन मद्दत गर्दछन्।
प्रोटीन्सले शारीरिक विकास, टिशू रिपेयर, र प्रतिरक्षा प्रकार्यमा प्रमुख भूमिका खेल्दछ। यसको अतिरिक्त, क्याल्शियम, भिटामिन डी, म्याग्नीशियम, र फास्फोरस जस्ता माइक्रोन्यूट्रिएन्टहरूले हड्डीहरूलाई पनि सुदृढ बनाउँछ।
फलफूलका तरकारीहरूमा प्रोटिनको अतिरिक्त पोषणहरू पनि धेरै प्रकारका हुन्छन्। प्रोटीनले इन्सुलिन वृद्धि कारक १ I(आइजिएफ–ज्ञ) को स्तर बढाउँदै काम गर्दछ।
फलाम र भिटामिन बी पनि फलफूलका तरकारीहरूमा पाइन्छ, जसले तपाईंलाई एनीमियाबाट बचाउँछ।
कुखुराको मासु प्रोटिन र धेरै पौष्टिक तत्त्वहरूले भरपूर कुखुराको मासु स्वास्थ्यको लागि पनि धेरै फाइदाजनक हुन्छ।
मासु पनि भिटामिन बी १२ को एक राम्रो स्रोत मानिन्छ। यो पानीमा घुलनशील भिटामिन हो जुन तपाईंको लम्बाई बढाउन काम गर्न सक्दछ। टॉरिन नामको तत्व पनि यसमा पाइन्छ, जुन एक एमिनो एसिड हो।
बदाममा उपस्थित भिटामिन र खनिजहरूका धेरै प्रकारहरू पनि लम्बाइका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।
स्वस्थ फ्याट बाहेक, फाइबर, मैंगनीज र म्याग्नीशियम पनि यसमा फेला पर्दछ। थप रूपमा, यसले भिटामिन९ई पनि समावेश गर्दछ, जो एक एन्टी अक्सिडेन्टको रुपमा दुईगुना हुन्छ । एक अध्ययनका अनुसार बदाम हाम्रो हड्डीहरूका लागि पनि फाइदाजनक छ।
पालक, केरा, अरुगुला, बन्दाकोबीमा पनि धेरै पोषक तत्त्वहरू हुन्छन्। यी तरकारीहरूमा भिटामिन सी, क्याल्शियम, फलाम, म्याग्नीशियम र पोटेशियम बाहेक भिटामिन के पनि पाइन्छ, जसले हड्डीको घनत्व बढाउँदै लम्बाइ बढाउने काम गर्दछ।
दही पनि प्रोटिन बाहेक पोषणको धेरै अलग प्रकारको एक राम्रो स्रोत मानिन्छ। २०० ग्राम दहीमा लगभग २० ग्राम प्रोटीन हुन्छ। त्यहाँ प्रोबायोटिक ब्याक्टेरियाहरू पनि हुन्छन् जसले केही आन्द्राहरूलाई लाभ पुर्‍याउँछन्
यसका साथै दहीलाई क्याल्शियम, म्याग्नीशियम, फास्फोरस र पोटेशियमको राम्रो स्रोत पनि मानिन्छ जसले हड्डीहरूलाई बलियो बनाउँदछ।
सखरखण्ड खानाले भिटामिन ए ले हड्डीको स्वास्थ्य सुधार गरेर लम्बाइ बढाउन मद्दत गर्दछ। यसमा दुबै घुलनशील र अघुलनशील पदार्थहरू समावेश छन्, जसले तपाईंको पाचन स्वास्थ्यलाई तन्दुरुस्त रहन मद्दत गर्दछ ।
आन्द्राका लागि राम्रो ब्याक्टेरियाहरूको बृद्धि गर्दछ। भिटामिन सी बाहेक, यो भिटामिन बी६ र पोटासियमको राम्रो स्रोत पनि हो।
क्विनोआ एक प्रकारको बीज हो जुन प्रायः अन्य अन्नको ठाउँमा प्रयोग गरिन्छ। क्विनोआ प्लान्टमा आधारित प्रोटीनको राम्रो स्रोत हो। यसले ती नौ प्रकारका अमीनो एसिडहरू समावेश गर्दछ, जुन तपाईंको शरीरलाई आवश्यक छ।
यसमा हड्डीको टिशूहरूको लागि आवश्यक म्याग्नीशियम पनि हुन्छ, जसले हड्डीहरूको खनिज घनत्व बढाउन सक्छ।
अण्डा पोषणको पावरहाउनस हो । यसमा प्रशस्त प्रोटीन पाइन्छ। हड्डी स्वास्थ्य को लागी आवश्यक पोषक तत्व को धेरै प्रकारहरु यो पाइन्छ।
८७४ केटाकेटीहरूमा गरिएको एउटा अध्ययनले पत्ता लगाएको छ कि बच्चाहरूले नियमित रूपमा अण्डा खानेको उचाई बढ्छ। अण्डाको पहेंलो भागमा भएको हेल्दी फ्याटले शरीरलाई फाइदा पुर्‍याउन सक्छ।
बेरीहरु ब्लूबेरी, स्ट्रबेरी, ब्ल्याकबेरी वा रास्पबेरी पनि पोषण को धेरै प्रकार संग सुसज्जित छन्। यसमा उपस्थित भिटामिन सीले कोषहरूलाई सुधार गर्दछ र टिशु रिपेयर गर्न काम गर्दछ।
सीले कोलेजेनको संश्लेषण पनि बढाउँछ, एक प्रोटीन जुन तपाईंको शरीरमा सब भन्दा बढी हुन्छ। एउटा अध्ययनका अनुसार कोलेजेनले यसलाई बढाएर हड्डीको घनत्व सुधार गर्दछ।
ओमेगा-३ फ्याट्टी एसिडमा धनी साल्मन माछा स्वास्थ्यका लागि पनि धेरै फाइदाजनक हुन्छ। ओमेगा फ्याट्टी -३ एसिड एक फ्याट हो जसले मुटुको स्वास्थ्यलाई फाइदा पुर्‍याउँछ, जुन शरीरको विकासको लागि पनि राम्रो मानिन्छ।
केही अनुसन्धानकर्ताहरू ओमेगा फ्याटी-३ एसिडले हड्डीको विकासलाई पनि बढावा दिन सक्छ। यसले बच्चाहरूमा निद्राको समस्यालाई पनि हटाउन सक्छ, जसले उनीहरूको विकासलाई प्रतिकूल असर गर्दछ।
Last Updated on: February 4th, 2021 at 12:21 pm